Ukuhlolwa kweMarcom: Enye Indlela Yokuhlola i-A / B | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 22, 2015 NgoLwesibili, ngoJulayi 21, i-2015 UMichael Grigsby
Ngakho-ke njalo sifuna ukwazi ukuthi kanjani marcom (ukumaketha ukuxhumana) kuyasebenza, kokubili njengemoto kanye nomkhankaso ngamunye. Ekuhloleni i-marcom kuvamile ukusebenzisa ukuhlolwa kwe-A / B okulula. Le yinqubo lapho ukusampula okungahleliwe kugcwalisa amaseli amabili ekwelashweni komkhankaso.
Iseli elilodwa lithola isivivinyo kanti elinye ngeke likuthole. Ngemuva kwalokho isilinganiso sempendulo noma imali engenayo iqhathaniswa phakathi kwamaseli amabili. Uma iseli lokuhlola lidlula iseli lokulawula (ngaphakathi kwamapharamitha wokuhlola wokuphakamisa, ukuzethemba, njll.) Umkhankaso uthathwa njengobalulekile futhi omuhle.
Kungani Wenza Okunye?
Kodwa-ke, le nqubo ayinakho ukwenziwa kokuqonda. Alwenzi lutho, lwenziwa endaweni engenamuntu, alunamthelela kumasu futhi azikho izilawuli zokunye okwenziwayo.
Okwesibili, imvamisa, ukuhlolwa kungcoliswe ngokuthi okungenani elilodwa lamangqamuzana lithole ngephutha ezinye izinhlinzeko, imiyalezo yomkhiqizo, ezokuxhumana, njll. Kukangaki imiphumela yokuhlolwa ibhekwa njengengahambelani, futhi engeyona eyemizwa? Ngakho bavivinya kaninginingi. Abafundi lutho, ngaphandle kokuthi ukuhlolwa akusebenzi.
Kungakho ngincoma ukusebenzisa ukuhlehla okujwayelekile ukulawula zonke ezinye izinto. Ukumodeliswa kokuhlehliswa futhi kunikeza ukuqonda ekulinganisweni kwe-marcom okungakhiqiza i-ROI. Lokhu akwenziwa ngaphandle, kodwa kunikeza izinketho njengephothifoliyo yokwandisa isabelomali.
Masithi besivivinya ama-imeyili amabili, ukuhlolwa kuqhathaniswa nokulawulwa futhi imiphumela ibuyile ingeyona eyemizwa. Sibe sesithola ukuthi ngephutha umnyango wethu womkhiqizo uthumele ucezu lweposi ngqo (ikakhulukazi) eqenjini lokulawula. Le ngcezu ibingahlelwanga (yithina) noma ibalwe ngokukhetha ngokungahleliwe amaseli wokuhlola. Lokho wukuthi, iqembu elenza ibhizinisi njengokujwayelekile lithole i-imeyili ejwayelekile kodwa iqembu lokuhlola – ebelibanjelwe ngaphandle - alizange likuthole. Lokhu kujwayelekile enhlanganweni, lapho iqembu elilodwa lingasebenzi noma lixhumana nelinye ibhizinisi.
Ngakho-ke esikhundleni sokuhlola lapho umugqa ngamunye uyikhasimende, sihlanganisa idatha ngesikhathi, yisho masonto onke. Sihlanganisa, ngeviki, inani lama-imeyili wokuhlola, ama-imeyili wokulawula nama-imeyili aqondile athunyelwe. Siphinde sifake okuguquguqukayo kanambambili okuphendula isizini, kulokhu njalo ngekota. ITHEBULA 1 likhombisa uhlu oluncane lokuhlanganisiwe nokuhlolwa kwe-imeyili okuqala ngeviki le-10. Manje senza imodeli:
Imodeli ejwayelekile yokuhlehla njengoba ihlelwe ngenhla ikhiqiza ukuphuma kweTHEBULA 2. Faka noma yikuphi okunye okuhlukile okuzimele okuthakaselwayo. Kwesaziso esithile kufanele kube ukuthi (inani) lentengo alifakwanga njengokuhluka okuzimele. Lokhu kungenxa yokuthi imali isiyonke ingukuhluka okuxhomekile futhi ibalwa njenge- (inani) lentengo * ubuningi.
Ukufaka intengo njengokuhluka okuzimele kusho ukuba nentengo ezinhlangothini zombili zesibalo, okungafanelekile. (Incwadi yami, I-Marketing Analytics: Umhlahlandlela Osebenzayo Wokukhangisa Kweqiniso, inikeza izibonelo ezibanzi nokuhlaziywa kwale nkinga yokuhlaziya.) I-R2 elungisiwe yale modeli ingama-64%. (Ngilahle i-q4 ukugwema isicupho se-dummy.) Emc = control email and emt = test imeyili. Zonke izinto eziguqukayo zibalulekile ezingeni lama-95%.
t-isilinganiso -2 -2.88 -2.77 4.85 1.97 2.49
Ngokuya nge-imeyili yokuhlola, i-imeyili yokuhlola yenze ngempumelelo i-imeyili yokulawula ngo-77 vs 44 futhi yayibaluleke kakhulu. Ngakho-ke, ukubala ezinye izinto, i-imeyili yokuhlola isebenze. Lokhu kuqonda kuza noma ngabe idatha ingcolisiwe. Ukuhlolwa kwe-A / B bekungeke kukhiqize lokhu.
ITHEBULA 3 lithatha ama-coefficients ukubala ukulinganiswa kwe-marcomm, umnikelo wemoto ngayinye ngokwemali engenayo. Lokho wukuthi, ukubala inani leposi eliqondile, i-coefficient ye-12 iphindaphindwa ngenani elisho lama-imeyili aqondile athunyelwe ayi-109 ukuthola i- $ 1,305. Amakhasimende asebenzisa inani elilinganiselwa ku- $ 4,057. Ngakho-ke $ 1,305 / $ 4,057 = 26.8%. Lokho kusho ukuthi iposi eliqondile linikele cishe ngamaphesenti angama-27 emali engenayo isiyonke. Ngokuya nge-ROI, ama-imeyili aqondile ayi-109 akhiqiza u- $ 1,305. Uma ikhathalogi ibiza u- $ 45 ngaleso sikhathi I-ROI = ($ 1,305 - $ 55) / $ 55 = 2300%!
Ngoba intengo ibingeyokuhluka okuzimele, kuvame ukuphethwa ngokuthi umthelela wentengo ungcwatshwe kokungaguquguquki. Kulokhu ukuguquguquka okungama-5039 kufaka intengo, noma yikuphi okunye okuguqukayo okungekho nephutha elingahleliwe, noma cishe amaphesenti angama-83 emali engenayo iyonke.
Kusho 0.37 0.37 0.11 109.23 6.11 4.94 1
Ukuhlehla okujwayelekile kunikeze enye indlela yokunikeza ukuqonda lapho kubhekene nemininingwane engcolile, njengoba kuvame ukwenzeka ohlelweni lokuhlola izinkampani. Ukuhlehliswa futhi kunikela ngokufaka imali kumali engenayo kanye necala lebhizinisi le-ROI. Ukuhlehla okujwayelekile kuyindlela ehlukile ngokuya ngamanani we-marcomm.
Tags: ukuhlolwamarcomUkuhlolwa kwe-marcomezokuhlaziyaezokuxhumana zokumakethaIsayensi Yezokumakethamike ukubhongaukumodeliswa kokuhlehliswa
UMike Grigsby ubambe iqhaza kwezentengiso zesayensi iminyaka engaphezu kwengu-25. Wayengumqondisi wezokumaketha kwezentengiso kwa UMillward Brown futhi uke wabamba izikhundla zobuholi eHewlett-Packard naseGap. Ngolwazi oluningi lwabasebenza phambili kwezentengiso zesayensi ne-data analytics, manje useqala inqubo yokuhlaziya ezitolo Ithagethi.
Enye indlela enhle odabeni olusebenzayo, uMike.
Ngendlela owenze ngayo, ngicabanga ukuthi akukho ukugqagqana kwabaxhumanisi abakhonjiwe emasontweni adlule. Ngaphandle kwalokho ubuyoba nengxenye ezenzakalelayo kanye / noma eyele isikhathi?
Jul 23, 2015 ku-11: 24 AM
Ukuthatha ukugxeka kwakho ngokusetshenziswa enhliziyweni, umuntu angayisebenzisa kanjani le modeli ukwengeza ukusetshenziswa kwesiteshi?